Lalana mihazo an’Ambohitrimanjaka Mody namboarin’ny Sinoa, efa simba sahady
Loza mahatsiravina Olona 13 maty navadiky ny kamio
Olona 13 no voalaza fa maty ary manodidina ny 30 no naratra noho ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina niseho tao amin’ny Kaominina antsoina hoe Salobe any amin’ny distrikan’Ampanihy ny alahady maraina tokony ho 8 ora, raha ny fampitam-baovao.
Ady amin’ny fandikan-dalàna ataon’ny taksibe Mijoro ho kaominina modely Andoharanofotsy
Fanatsarana ny lalam-pirenena faharoa Hifarana amin’ny aprily 2019 ny fizahana
Tombanana ho 2 miliara dolara no fanampiana ho azo avy amin-dry zareo japoney mikasika ny fanatsarana ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalamby ary ireo rehetra heverina fa tokony hitarina ho fanamorana ny fifanakalozam-bokatra eo amin’ny
Fivondronamben’ny mpitatitra “Tena marary izahay”
Mitaraina ho maharary loatra ireo mpitatitra eto amintsika noho ny tsy fijeren’ny fitondram-panjakana azy. Lohalaharana ny fiakaran’ny vidin-tsolika tsy miato, izay efa mananika ny 4.000 Ar kelikely ny iray litatra amin’ny gazoala.
Koperativa mihazo an’i Manalalondo Fiara lehibe sy 4x4 ny 99 %-n’ireo miasa ao
Mody namboarin’ny Sinoa ilay lalana mihazo an’Ambohitrimanjaka nosimban’ny fiaran’izy ireo tamin’ny fanokafana ilay lalam-baovao mihazo an’Ambohidratrimo iny ny herinandro teo nentina nampitoniana ilay fitokonana notanterahin’ny vahoaka teny an-toerana, herinandro mahery lasa izay.
Mody nosarontsaromana sy notrongisina io lalana io, hoy ireo mpamily taksibe, hany ka efa simba sahady indray. Mitondra faisana tanteraka izy ireo vokatr’izany. Fiara roa isan’andro raha kely no mipotsaka resaoro. Mitombo ihany koa ny gazoala lanin’ny fiara. Nihena ho telo isan’andro ihany koa sisa ny toro vitan’ny fiara iray raha nahatratra dimy teo aloha. Tena maty antoka izahay, hoy ireo mpitatitra. Manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana ny amin’ny tokony hanamboarana haingana ity lalana mankany Ambohitrimanjaka ity izy ireo. 13 km monja miala ny renivohitra mantsy no misy an’Ambohitrimanjaka. Miisa efatra ny koperativa misy amin’iny kaominina iny toy ny KOFIZA, ny KOFIBAM, ny FIBAM…Tsy miova ny saran-dalana fa mbola 500 Ar hatreto.